Banijya News | कपाल लामो बनाउँने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय - Banijya News कपाल लामो बनाउँने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय - Banijya News
कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मनपर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । हिजोआज अधिकांश महिलालाई कपालसँग सम्बन्धित समस्याले सताएको हुन्छ । धेरैजसोमा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ भने कतिलाई कपाल लामो नहुने समस्याले पिरोलेको हुन्छ । कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन् । जसमध्ये प्रदूषण, अस्वस्थ जीवनशैली, खाना सम्बन्धित नराम्रो बानी र शारीरिक गतिविधि आदि हुन सक्छ । त्यसैले, कपाल बढेन भनेर आत्तिनुपर्ने पर्दैन । केही सरल घरेलु उपाय अपनाएर कपाललाई लामो र स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ।